အင်ဂျင်နီယာကြီးကြပ်ရေးမှူး | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » ဂျော့ဘ် » အင်ဂျင်နီယာကြီးကြပ်ရေးမှူး
တင်းနစ် Channel ကိုအားကစားနှင့်တင်းနစ်၏လူနေမှုပုံစံစတဲ့နှစ်ခုလုံးမှဆက်ကပ်အပ်နှံတစ် 24 နာရီထုတ်လွှင့်ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်အွန်လိုင်း streaming များကွန်ယက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ရက်ကကျယ်ပြန့်-အထိကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတင်းနစ်အသိုင်းအဝိုင်းအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှရှုထောင့်မှမူလနေရာဖြစ်သည်။ တင်းနစ် Channel ကိုထိပ် MSOs အဖြစ် DirecTV နှင့်ဟင်းလျာများကွန်ယက်အားဖြင့်တနိုင်ငံလုံးယူသွားတတ်၏။
တင်းနစ် Channel ကိုပု Sinclair အသံလွှင့် Group ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ Sinclair အသံလွှင့် Group နှင့် Sinclair ဒစ်ဂျစ်တယ် Solutions Sinclair ဆက်သွယ်ရေးအင်အားကြီးအောင်ထံအပ်နှံကြသည်! ကျနော်တို့တိုင်းပြည်အတွင်းအကြီးဆုံးနှင့်အများဆုံးပိုမိုစုံလင်ရုပ်မြင်သံကြားအသံလွှင့်ကုမ္ပဏီယနေ့ဖြစ်ကြ၏။ Sinclair ပိုင်ဆိုင်လုပ်ကိုင်အစီအစဉ်များသို့မဟုတ် 173 ပထဝီအနေအထားအရမတူကွဲပြားစျေးကွက်များတွင်တည်ရှိသော 81 ဘူတာမှန်ဆောင်မှုကိုပေးစွမ်းသည်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဒစ်ဂျစ်တယ်အုပ်စုတစ်စုလုံးကိုတိုင်းပြည်အပေါ်ပရိသတ်တွေရန်, မိုဘိုင်းနှင့် over-the-ထိပ်တန်းရုပ်သံလွှင့်က web မှအများဆုံးဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့အကြောင်းအရာဆောင်ခဲ့အပေါ်အာရုံစူးစိုက်နေပါသည်! ကျွန်ုပ်တို့၏အောင်မြင်မှုရူပါရုံကိုယုံကြည်နှင့်ငါတို့န်ထမ်းဘို့ကြီးစွာသောအနာဂတ်ရေးအတွက်ဆက်ကပ်အပ်နှံထားသူထူးခြားသောန်ထမ်းများနှင့်တစ်ဦးစံပြစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့၏ရလဒ်ဖြစ်ပါသည်။ သင်တစ်ဦးစက်မှုလုပ်ငန်းဝါရင်သို့မဟုတ်ပဲထွက်စတင်ဖွစျစေ, သငျသညျ Sinclair မှာတှေ့နိုငျပါသညျ! ကျနော်တို့အသံလွှင့်လောကီသားတို့သည်အတိုးတက်နေကြသည်နှင့်အကြှနျုပျတို့သညျကြှနျတျောတို့ကအနိုင်ဂိုးအဖွဲ့ join ချင်တယ်!
ကျနော်တို့လက်ရှိအနေနဲ့ကြုံတွေ့အင်ဂျင်နီယာကြီးကြပ်ရေးမှူးရှာကြသည်။ အဆိုပါအရည်အချင်းပြည့်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းကိုသြဒိနိတ်နှင့်ကွန်ပျူတာအခြေပြုခြင်းနှင့်ထုတ်လွှင့်စက်ကိရိယာများကိုထိန်းသိမ်းရန်ပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့တိုက်ရိုက်လွှစတူဒီယိုဘဏ်ဍာ, ရှိသမျှ post ကိုထုတ်လုပ်မှု Workflows နှင့်အခြေခံအဆောက်အဦများအဆင့်မြှင့်တင်ကိုထောကျပံ့ဖို့အတွေ့အကြုံရှိရုပ်မြင်သံကြားအင်ဂျင်နီယာရှာကြ၏။ ဒါဟာတစ်ဦးချင်းစီကို install နှင့်ဗီဒီယို, အသံဖိုင်နှင့်ရုပ်မြင်သံကြားအသံလွှင့်သူနဲ့ဆက်စပ်သည်အခြားကိရိယာများထိန်းသိမ်းခြင်းအတွက်တာဝန်ရှိသည်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ဒါက 24 /7ထုတ်လွှင့်စက်ရုံအတွက်လုပ်ငန်းလည်ပတ်အခန်းကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်။ ကွန်ယက်ရဲ့ပရိုဂရမ်းမင်း၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ feeds တွေကို၏ 2000 နာရီကျော်များ၏ပေါင်းစည်းမှုဖြစ်ပါတယ်။ အများစုမှာတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှလှုပ်ရှားမှုနင်္ဂနွေနေ့ကတဆင့်လုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုမိုးသည်းထန်စွာအာရုံစူးစိုက်မှုသောကြာနေ့နှင့်အတူနံနက်စောစောသို့မဟုတ်နေ့ချင်းညချင်းဆိုင်းနေစဉ်အတွင်းတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ သူတို့အရက် / နာရီအဖြစ်မကြာခဏအားလပ်ရက်အလုပ်လုပ်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
တင်းနစ် Channel ကိုထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံမှာအသုံးပြုသောအားလုံးကိရိယာများတစ်ခု On-going အချိန်ဇယားကိုပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအစီအစဉ်ကိုပြင်ဆင်ပါ။
ကြိုတင်ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းမှု Perform နှင့် / သို့မဟုတ်နီးပါးမည်သည့်အီလက်ထရောနစ်ကိရိယာသို့မဟုတ်ထောက်ခံမှုအီလက်ထရွန်းနစ်အိမျ၌ဖြစ်စေဝေးလံသောနေရာများမှာရှိမရှိအပေါ်ဖြေရှင်းရာမှာ; , ဗီဒီယိုပစ္စည်းကိရိယာများနှင့် / သို့မဟုတ်အသံ switching ပစ္စည်းကိရိယာများ, အပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်စောင့်ကြည့်ကိရိယာများ: အပါအဝင်သော်လည်းမကန့်သတ်ထား HD ကင်မရာများ, Fiber / ကြေးနီ encoding က, ဒီကုဒ်ဒါနှင့် streaming များပစ္စည်းကိရိယာများ။
ထုတ်လွှင့်ကွန်ပျူတာ-based ပစ္စည်းကိရိယာများဆော့ဖ်ဝဲ, ဟာ့ဒ်ဝဲ, လိုင်စင်နှင့်စက်ရုံတစ်လျှောက်လုံးစနစ်များအပေါ် local area network application များကိုထိန်းသိမ်းပါ။
ဒုက္ခမှတုန့်ပြန် (တစ်ခါတစ်ရံသာမန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနာရီပြီးနောက်) ထုတ်လွှင့်သို့မဟုတ်ကွန်ပျူတာပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်အတူတောင်းဆိုထားသည်။
Assist နှင့်အနာဂတ်ကိရိယာများတပ်ဆင်, လိုအပ်ချက်များကိုနှင့်ဘတ်ဂျက်အကြံပြုချက်များ၏စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအတွက်အကြံပြုသည်။
21st ရာစုကျွမ်းကျင်မှု set ကိုတစ်ဦးအလွန်ကြီးစွာသောအသင်း-oriented သဘောထားကိုနှင့်အရည်အသွေးတစ်ခုအပျနှံ။
သက်ဆိုင်သောမီဒီယာသိမ်းဆည်းခြင်းနှင့်သိုလှောင်မှုအပါအဝင်ကွန်ပျူတာအခြေပြုတည်းဖြတ်ရေးစနစ်များနှင့်စပ်လျဉ်း Workflows ၏အသိပညာ လွန်စွာလိုလားသော နှင့် EVS ပလက်ဖောင်း။
: အပါအဝင်အင်ဂျင်နီယာအလေ့အကျင့်၏အမြင့်စံ , OSHA ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုစောင့်ကြည့်, CAD ရေးဆွဲနှင့်အမြင့်အလိုလိုသိ cable ကိုစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်တံဆိပ်ကပ် အသုံးပြု. အင်ဂျင်နီယာစာရွက်စာတမ်းများမှ updates များကိုတင်သွင်းခြင်းနှင့်အသုံးပြုသူ SOP ရဲ့ကိုအသစ်သောပစ္စည်းကိရိယာများကိုထည့်သွင်းနိုင်ဖြစ်ခြင်း။
ထုတ်လွှင့်ရုပ်မြင်သံကြားများတွင်အတွေ့အကြုံ5နှစ်ပေါင်းတစ်ဦးကနိမ့်ဆုံးအလုပ်အကိုင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားဘို့လိုအပ်ပါသည်။
အတူတစ်ဦးသည်ခိုင်ခံ့အိုင်တီနောက်ခံ လွန်စွာလိုလားသော အတှေ့အကွုံ
တစ်ဦးကကောလိပ်ဒီဂရီ, SBE လက်မှတ်နှင့် A + အောင်လက်မှတ်ဆန္ဒရှိနေကြသည်။
Sinclair အသံလွှင့်အုပ်စု, Inc တစ်ခုတူညီသောအခွင့်အရေး Equal Opportunity အလုပ်ရှင်နှင့်ဆေးဝါးအခမဲ့လုပ်ငန်းခွင်ဖြစ်ဂုဏ်ယူပါ!
ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ပေါင်းစည်းမှု post ကိုထုတ်လုပ်မှု တီဗီနည်းပညာ ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2017-07-31
ယခင်: BCC - အင်ဂျင်နီယာ Operarions ကြီးကြပ်ရေးမှူး